“ အကွောငျးတဈခုကွောငျ့ မဦေးနဲ့ ပွတျဖို့အတှကျ စဉျးစားထားတဲ့ ဟနျလငျး” - Cele Gabar
မဦေးနဲ့ဟနျလငျးကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လူသိမြားထငျရှားတဲ့ လိငျတူခဈြသူစုံတှဲဖွဈပါတယျ။ ပွောငျးလဲလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ လိငျတူခဈြသူစုံတှဲတှမြေားပွားလာတာဖွဈပွီး မဦေးတို့အတှဲကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခပြွခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးစုံတှဲလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။ လိငျတူခဈြသူတှဖွေဈပမေယျ့ သူတို့ရဲ့တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အရမျးဂရုစိုကျခဈြတတျပုံတှကွေောငျ့ ပရိသတျကွားမှာရပေနျးစားပွီး အားပေးဝနျးရံမှုအပွညျ့အဝရရှိနတေဲ့ စုံတှဲဆိုလညျး မမှားပါဘူး။
ဝဖေနျတိုကျခိုကျသူတခြို့ရှိပမေယျ့ အပွုံးမပကျြပဲ ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့လမျးကွောငျးပျေါမှာသာ အကောငျးဆုံးလြှောကျလှမျးပွီး အောငျမွငျမှုရရှိနကွေသူတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ မဦေးဟာ မွနျမာနိုငျငံက ထိပျတနျးမိတျကပျပညာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ရပျတညျနတောဖွဈပွီး ဟနျလငျးကတော့ ပနျးအလှဆငျပညာရှငျအနနေဲ့ ရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။
အရမျးခဈြတတျကွတဲ့သူအခငျြးခငျြးဖွဈတာကွောငျ့ အခဈြခရီးလမျးက သာယာဖွောငျ့ဖွူးနတေယျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခြိုကွီးပဲမကွိုကျတဲ့ ဟနျလငျးတဈယောကျကတော့ မဦေးကို ခဏလောကျပွတျကွရအောငျဆိုပွီး ပွောခဲ့တာကို “လခှမျး ဘာပွောတယျမှတျလဲ? ခဈြရေ မလှမျးတာ မဆှေးရတာကွာပွီတဲ့ ကိုယျတို့ခဏပွတျကွမလားတဲ့…ကဲဘယျလိုလုပျရမလဲပွော” ဆိုပွီး မဦေးက သူခဈြရတဲ့ပရိသတျတှကေို ပွနျလညျရေးသားမြှဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
“ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် မေဦးနဲ့ ပြတ်ဖို့အတွက် စဉ်းစားထားတဲ့ ဟန်လင်း”
မေဦးနဲ့ဟန်လင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသိများထင်ရှားတဲ့ လိင်တူချစ်သူစုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လိင်တူချစ်သူစုံတွဲတွေများပြားလာတာဖြစ်ပြီး မေဦးတို့အတွဲကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးစုံတွဲလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းဂရုစိုက်ချစ်တတ်ပုံတွေကြောင့် ပရိသတ်ကြားမှာရေပန်းစားပြီး အားပေးဝန်းရံမှုအပြည့်အဝရရှိနေတဲ့ စုံတွဲဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူတချို့ရှိပေမယ့် အပြုံးမပျက်ပဲ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသာ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းပြီး အောင်မြင်မှုရရှိနေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မေဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ထိပ်တန်းမိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး ဟန်လင်းကတော့ ပန်းအလှဆင်ပညာရှင်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းချစ်တတ်ကြတဲ့သူအချင်းချင်းဖြစ်တာကြောင့် အချစ်ခရီးလမ်းက သာယာဖြောင့်ဖြူးနေတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိုကြီးပဲမကြိုက်တဲ့ ဟန်လင်းတစ်ယောက်ကတော့ မေဦးကို ခဏလောက်ပြတ်ကြရအောင်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာကို “လခွမ်း ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ? ချစ်ရေ မလွမ်းတာ မဆွေးရတာကြာပြီတဲ့ ကိုယ်တို့ခဏပြတ်ကြမလားတဲ့…ကဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြော” ဆိုပြီး မေဦးက သူချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ဆေးဖိုးမရှိလို့ ဈေးထှကျရောငျးနတေဲ့ အဘိုးကို ဆေးဖိုးလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ဟိနျးမငျးသူ”